Rotary International: asa fa tsy anarana fotsiny eto Boeny | Région Boeny
Nanao fitsidihina ara-pomba fanajana ny biraon’ny Faritra Boeny ny « Rotary International » izay notarihin’Atoa Alen K.Topsy, Governoran’ny « Rotary District 9220 » avy ao amin’ny nosy Maurice ary notronin’ireo mpikambana ao amin’ny Rotary eto Mahajanga sy ireo avy any Antananarivo ny zoma 08 Janoary 2015.
Atoa Hemedy, Sefo kabinetran’ny Faritra no nisolo-tena ny Lehiben’ny Faritra nandray azy ireo tao amin’ny Bloc Administratif Ampisikina.
Marihina fa ny nosy Comores, Djibouti, Madagasikara, Mayotte, La Réunion, Maurice ary Seychelles dia ao anatin’ny Rotary International District 9220.
Ny antony fandalovan’izy ireo teto amin’ny Faritra Boeny dia hanao tombana sy hanara-maso ny asa vitan’ireo mpikambana ary afahan’ny Govenora manitsy sy manoro hevitra an’ireo mpiara-mikambana. Hidinika ihany koa izay hotanterahina amin’ity taona 2015 ity.
Manana anjara asa eo amin’ny fandriampahalemana sy ny fandravonana ny disadisa ny Rotary International raha ny fanazavan’ny Governorany, ankoatran’ny asa sosialy toy ny miaro sy mikarakara ny marary, manao asa fanadiovana, miahy ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza ary mampianatra ireo tsy mahay mamaky teny sy manao fanabezana fototra. Mandray anjara amin’ny asa fampandrosoana ara-toekarena.
Nampahafantarin’ireto mpanao asa soa ireto araka izany ny fiaraha-miasan’izy ireo taty amin’ny Faritra Boeny, toy ny fanohanana ny fikambana sosilay iray ao Amborovy, ny fanomezana vovon-drano ho an’ny Kaominina Amboromalandy, Antanambao Andranolava sy Ampijoroa ary Berivotra ao anatin’ny Distrika Mahajanga II sy Marovoay.
Nankasikatra ireo ny zava-bita maro ireo Atoa Sefo kabinetran’ny Faritra nandritra ny fifanolorana no mari-pahatsiarovana teo amin’ny roa tonta.